Ny Fomba Anoheran’Ireo Syriana Mpikatroka Any Raqqa Ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2016 15:26 GMT
Naoty avy amin'ny RBSS any Raqqa mivaky hoe: “ISIS sy Assad, Tanjona mitovy, Tombontsoa mitovy, 29/9/2014″. Dikasary avy tamin'ny sarin'ny RBSS nisongadina tao anatin'ny tatitry ny Sky News.
Lahatsary mahazendana azon'ny Sky News, mampiseho ny fomba anoheran'ireo Syriana mpikatroka any Raqqa ny ISIS, Raqqa ilay tanàna izay nomena anaram-petaka hoe ‘ny renivohitry ny ISIS’. Anisan'ny ao anatin'ny vondrona ‘Raqqa is Being Slaughtered Silently” (RBSS) (Tapa-tenda Tsikelikely i Raqqa) ireo mpikatroka mafana fo ireo, vondrona mpikatroka voarindra tsy manana fironana, lazalazain'ny New Yorker hoe “sahala amin'ny orinasa ambanin'ny tany fanaovana gazetin'ny mpikatroka mafana fo”, izay sady niady tamin'ny fitondran'i Bashar Al Assad tamin'ny fiatombohan'ny revôlisiôna, avy eo ny ISIS, fony nitantana ny tanàna ny Free Syrian Army (FSA) (Tafika Malalaka Syriana).
Nifankahalàla tamin'i Abdulaziz Al-Hamza izahay, Syriana mpikatroka mafana fo izay sesitany any Tiorkia ankehitriny, noho ny fitiavany ny FSA ary anisan'ny mpanorina ny RBSS. Nihaona tamin'ny mpikatroka iray hafa i Al-Hamza, Sarmad Al Jilane, izay sesitany any Tiorkia ihany koa, ary miaraka amin'ireo olona hafa 15, namorona ny RBSS izy ireo amim-panantenàna ny hanamora ny fampitàna ireo sary sy lahatsary nalain'ireo mpikatroka manohitra ny ISIS mbola mipetraka any afovoan'ilay ‘renivohitry’ ny vondrona mpampihorohoro, izay mifehy faritra amin'ireo ampahan'i Syria sy Iràka.
“Lazain'ny olona fa Raqqa no renivohitry ny ISIS. Te-hanaporofo izahay fa diso izy ireo,” hoy i Al Jilane tamin'ny Sky News. Marina fa isanandro izahay mahita lahatsarin'ireo olona manohitra ny ISIS. Miainga amin'ny fanangànana tanambokovoko amin'ny alina hanoratana ny hoe ‘enga anie hirodana ny ISIS’ eny amin'ny rindrina, ady iray tsy misy fitaovam-piadiana ny fanoheran'izy ireo, izay resy tamin'ny ady nifanoherana tamin'ilay vondrona mpampihorohoro ny taona 2014.
Nomen'ny Sky News anarana hoe ‘Abu’ ilay lehilahy izay nanoratra io naoty io, mba hiarovana ny mombamomba azy. Manamarina ny fihitaran'ny haratsian-toetran'ny ISIS ny fijoroany vavolombelona. Omena vola ireo tanora eo anelanelan'ny 16 sy 18 taona mba hiampanga ireo mpandàla ny FSA. Esorina amin'ireo fianakaviany ireo tanora ambanin'ny 16 taona ary alefa any amin'ny toby izay anaovana fanasàna atidoha amin'ny fotokevitra tokony arahana. “Avadiky ny ISIS ho baomba miandry fipoahana ireo ankizy ireo,” hoy i Abu nanamarika. Misy sary manahirana be ny saina avy eo manaraka izay, ahitantsika ireo ankizy mody maty ary ankizy iray hafa manapa-doha biby tsy tena izy. Miteny aminay avy eo i Al Jilane momba ny fomba ametrahan'ny ISIS ireo ankizy eo anoloana rehefa misy fanafihana ary ny fanofanany izy ireo ho lasa mpanao vy very ny ainy na terena hanao manda olona.
Fa tsy miezaka ny manakorontana ny lalànan'ny ISIS ao Raqqa fotsiny ny RBSS. Miezaka ny miady amin'ny fotokevitry ny ISIS ihany koa izy ireo. Ohatra iray nomena ny fampiasàna ny gazetiboky mifono sahala amin'ilay zarain'ny ISIS. Rehefa manokatra ilay gazetiboky ny mpamaky vao mahita ireo fanambaràna manohitra ny ISIS napetrak'ireo mpikatroka RBSS mafana fo.
Havia: mpikatroka mafana fo an'ny RBSS mametraka takelaka mivaky hoe “Tsia ho an'ny ISIS ary tsia ho an'i Assad, fahalalahana mandrakizay”. Havanana: mpikatroka mafana fo an'ny RBSS manoratra eo amin'ny rindrina hoe “enga anie hirodana ny ISIS”. Dikasary avy tamin'ny sarin'ny RBSS nisongadina tao anatin'ny tatitry ny Sky News.
Ireo mpikatroka mafana fo mpanohitra ny ISIS any Raqqa, mampiakatra lakroa iray taorian'ny nandrodanan'ny vondrona mpampihorohoro azy io. Dikasary avy tamin'ny lahatsarin'ny RBSS nisongadina tao anatin'ny tatitry ny Sky News.
Manao vy very ny ainy ireo mpikatroka RBSS. Ny tena marina, efa namoy ny ainy ny sasany amin'ireo mpikatroka RBSS. Mutaz Billah Ibrahim, mpanao gazety iraika ambiny roapolo taona, an'ilay Shaam News Network (SNN) tantanin'ny olon-tsotra, novonoin'ny ISIS ny 4 May 2014, taorian'ny nahatratrarana ny solosainany entin-tànana nisy ny sary famantarana ny RBSS. Ny volana Oktobra 2015, natao toy izany ihany koa i Ibrahim Abd Al-Qader tany Urfa, Torkia atsimo, niaraka tamin'ireo mpanao gazety namana Fares Hamadi. Niasa ho an'i RBSS i Al-Qader ary ny ‘maso eo amin'ny firenena‘, vohikalam-baovao Syriana.
Avy eo tonga ny anjaran'i Ahmad Muhammed Al Musa, mpikambana ao amin'ny RBSS ihany koa, izay novonoinà lehilahy nisaron-tava tany Idlib, Syria. 10 andro taty aoriana, nisy nitifitra tao Gaziantep, Tiorkia ilay mpikatroka mafana fo an'ny RBSS sady talen'ny famoahana horonantsary Naji Jerf.
#Raqqa Maty novonoin'olona nisaron-tava tao #Idlib #Syria i Ahmad Mohamed Almossa iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny #RBSS
Matin'ny basin'ireo mpamoritra androany tao Gaziantep ny talen'ny fanodinana lahatsary ato aminay, Nai Jerf, “niteraka 2″
Nomen'ny Kaomity Miaro ny Mpanao gazety (CPJ) voninahitra tamin'ny fanomezana ny Lokan'ny Fahalalahan'ny Fanaovana gazety Iraisampirenena 2015 ny RBSS noho ny asa fanaovany gazety. Tamin'ny kabarim-panekeny, nilaza izao ny mpitondra tenin'ny RBSS (ampahany):
Miteny androany aho amin'ny anaran'ireo Syriana an-tapitrisany mitaky firenena malalaka, demokratika ary miray.
Malahelo lalina ny fireneko tsara tarehy aho. Tena mijaly mafy amin'ny aretin'ny tazom-pahefànaa sy ny homamiadan'ny fampihorohoroana izy, tena mafy tokoa hany ka manahy ny faharavan'ny fanahiny aho.
Eo antenantenan'ny hery roa misetrasetra sy lozabe izahay. Ny fitondrana manao heloka bevava ny voalohany, tsy manan-tsaina hafa afatsy ny fahefàna, milaza ho miady amin'ny fampihorohoroana amin'ny famonoana ireo ankizy.
Ny faharoa manaparitaka ny ratsy sy ny tsy rariny, ary mandoko ny firenenay ho mainty.
Samy manao anay ho toy ny mpanao heloka bevava izy ireo satria aborakay amin'izao tontolo izao ny asany. Amin'izao, lasa voasazin'ny lalàna ho faty ny fanononana fotsiny ny anarana hoe “RBSS”.
Tanaty tafatafa iray ny volana Jolay 2015 niaraka tamin'ny CPJ, nilaza ny zavatra mety hahazo ny vondrona i Abu Mohammed, mpanorina ny RBSS izay miaina any ivelan'i Syria:
Tonga amin'ny endriny maro ny fandrahonana, fa miseho efa ho isanandro izy ireny.” Nilaza izy fa ireo mpikambana any ivelan'i Syria, tafiditra amin'izany ny tenany, dia matetika mahazo antso an-tariby sy emailaka milaza fa raha tsy mijanona mandefa ireo vaovao izy ireo, dia ho vonoina. Nisy nijirika ny Twitter an'ny vondrona sy ny kaonty emailaka an'ny tsirairay. Fa ireo mpanao gazety ao anatin'ny Raqqa no tena tandindonin-doza lehibe indrindra, hoy Abu Mohammed. “Nasiana fakàna lahatsary mba hanarahana maso ireo rehetra ahiahiana ho miasa ho anay. Raha tratra eny an-dalana ny olona voarohirohy, vonoina eo imason'ny rehetra izy ireo.”
Amin'izao fotoana hanoratana izao, mpikamban'ny RBSS iray ihany sisa no mijanona any Torkia.
Mandahatra an'i Syria ho anisan'ireo ratsy indrindra amin'ireo mpanitsakitsaka ny fahalalahana miteny ireo Mpitati-baovao Tsy Voafetran'ny Sisintany (RSF), any amin'ny 176 amin'ireo firenena 179 amin'ny tondrony manerantany momba ny fahalalahan'ny fanaovana gazety. Hatramin'ny volana Martsa 2011, mpanao gazety niisa 49 no maty novonoina tany Syria, mpanao gazety valo naiditra am-ponja, mpisera amin'ny aterineto 17 nampidirina am-ponja ary mpisera amin'ny aterineto sy olon-tsotra mpanao gazety 142 novonoina.